मापसेले बेसुरमा वडा अध्यक्ष मेरो घरमा आए र सिधै शरीर माथी चढे ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/मापसेले बेसुरमा वडा अध्यक्ष मेरो घरमा आए र सिधै शरीर माथी चढे !
ओखलढुंगा । ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका ३ का वडा अध्यक्ष मेडल राईले स्थानीय महिलालाई दु’श्क’र्मको प्रयास गरेको खुल्न आएको छ । पिडित महिलाले वडाध्यक्षले मापसे गरेर बेसुरमा आफ्नो घर छिरेको र उनी आफ्नो शरीरमाथी चढेको जाहेरीमा खुलाएकी छिन् । उनको जाहेरीपछि वडा अध्यक्षलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
एक महिलामाथि दु’श्क’र्म गरेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका डिएस्पी रुपेश खड्काले बताउनुभयो । दु’श्क’र्मको जाहेरी आएकाले उनलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
अध्यक्ष राईले चार दिन पहिले मापसे गरेर घरैमा गई दु’श्क’र्म गरेको पीडित महिलाको आरोप छ । घटना चार दिन पहिलेको भएपनि स्थानीय स्तरमा मिलापत्र गर्न छलफल गराइ माफी मगाउने कामसमेत भएको स्थानीयले बताएका छन् ।
घर ढलानको दिन खानपान निकै अबेरसम्म भएको र मापसेले लठ्ठ भएका अध्यक्ष बेसुरमा आफ्नो घरजाँदा महिलाको घर पुगेको स्थानीयले बताएका छन् । पीडित पक्षले भने महिला सुतेकै ठाउँमा गएर दु’श्क’र्म प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ ।